Imisebenzi Engcono Kakhulu Yangaphandle eKildare - IntoKildare
Imindeni, Abathandi Bangaphandle, Izinto Ozozenza
Sinakekela eKildare ye-Wellbeing
IKildare igcwele ubuhle obubabazekayo futhi ngaphakathi kwawo wonke ama-5kms kunendlela yehlathi noma ukuhamba kwemvelo okuzotholakala. Ukuphumela ngaphandle nokuzivocavoca kulesi simo sezulu esisha futhi esimnandi ekwindla kuhle enhliziyweni nasengqondweni njengokuzivocavoca, kanye nokukugcina ulungile, kukhipha ama-endorphin azosiza abantu ukuthi bahlale benethemba. Thatha ikhefu ehhovisi lakho lasekhaya ukuze uhambe isikhathi sokudla kwasemini noma ulethe izingane ekuzijabuliseni kwasendaweni emasimini aluhlaza nasemathafeni emvelo anokhuni agcwele iKildare. Pakisha ipikinikini, bopha okufudumele bese uthola amagugu wemvelo uKildare akubekele wona.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-𝔸𝕟𝕟𝕖 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕖 𝕊𝕠𝕞𝕖𝕣𝕤 🇮🇪 (@amsomers_photos)
Ibanga elifushane nje ngaphandle kweRathangan Village kunemfihlo egcinwe kahle kunazo zonke e-Ireland! Killinthomas Izinkuni e-County Kildare kufana nokuthile okuqonde ngqo kusuka e-fairytale nelinye lamahlathi amangalisa kunazo zonke e-Ireland! Indawo yokutholakala kwamahektare angama-200 iyihlathi elixubile le-hardwood conifer elinezimbali nezilwane ezahlukahlukene kakhulu. Cishe kube ngamakhilomitha ayi-10 wokuhamba okubhalwe uphawu okhunini kubo bonke labo bathandi bokuhamba izintaba, futhi lokhu kunikeza ukufinyelela ezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-tazt.photos (@ tazt.photos)
Kutholakala ngaphezu kwemizuzu engama-30 ngaphandle kweKildare Town kulele i- IDonadea Forest Park. Ngemizila emithathu ehlukene yokuhamba, konke kusuka ku-1km kuya ku-6km, kunokuthile okuzohambisana nayo yonke iminyaka lapha. Ukuhambahamba ntambama okuncane, landela iLake Walk, ezungeza ichibi eligcwaliswe ngamanzi futhi elingathathi ngaphezu kwesigamu sehora. INature Trail ingaphansi nje kwe-2km, enqamula phakathi kobuciko obumangalisayo befa. Kubantu abahamba kakhulu, i-Aylmer Walk iyindlela engu-6km Slí na Slainte eletha abahambahamba nxazonke zepaki.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-Ewen Cameron (@ ewen1966)
Jabulela ukuhamba ngempelasonto osebeni lomunye wemifula yomlando wase-Ireland, uMfula iBarrow. Ngokuthile okuthakazelisa ngayo yonke indawo kule ndledlana eneminyaka engama-200 ubudala, lo mfula ungumngane ofanele kunoma ngubani ohamba noma ohamba ngebhayisikili ngasogwini IBarrow Way. Zizwa izimbali nezilwane ezinamachashazi asogwini lwayo, izingidi ezithandekayo namakhaya amadala okhiye wokugcina.
Okuthunyelwe okwabiwe nguSadie Basset (@ sadie.basset)
Indlela efanayo eya kwiBarrow Way, le ndlela enhle yomugqa, IRoyal Canal Way ilungele labo abafuna ukuthatha ikhofi lokususa bese beqhubeka nokuhamba. Ukuhamba ufike lapho uthanda khona, lapho-ke ungagxumela kalula ezokuthutha zomphakathi ukuze zikubuyisele lapho uqala khona. Kunezibonelo eziningi ezibalulekile zeminyaka edlule yeshumi nesishiyagalombili yemivubukulo yezimboni ongayithanda endleleni, kufaka phakathi iRyewater Aquaduct ethatha umsele ophakeme ngaphezu komfula iRye, futhi okwathatha iminyaka eyisithupha ukwakhiwa.
Okuthunyelwe okwabiwe nguScott H. Smith (@ scottsmith02)
Ezinze eMpumalanga Yase-Ireland Yasendulo yi-County Umzila we-Kildare Monastic, inkolo yobuKristu ivela e-Ireland. Lo mzila omuhle uhlanganisa kokubili okuhle kakhulu kwe-Ireland kanye nomlando wayo wasendulo oyingqayizivele. Ukunweba kusuka eCastledermot kuye e-Oughterard eduze kwaseStraffan, lo mzila wama-92km uzokuholela emanxiweni asemkhathini wezindela ezindala, izinsalela zemibhoshongo eyindilinga neziphambano eziphakeme ezigqokwa isikhathi eside. Umhlahlandlela womsindo wamahhala ungalandwa ukukusiza ukuthi ungene ngokujulile emlandweni wasendulo wezindela wase-Ireland.
Kusatshalaliswa amamayela angama-370 sq. Kuya ezifundeni iMeath, Offaly, Kildare, Laois neWestmeath, i UBog ka-Allen iyimbumba ephakanyisiwe echazwe njengengxenye enkulu yomlando wemvelo wase-Ireland njengeNcwadi yamaKells. Ibhotela le-Bog, izinhlamvu zemali, i-Elk enkulu yase-Ireland kanye nesikebhe esidala esimbiwe ngezinye nje zezinto ezithakazelisayo ezitholakale zisesimweni esigciniwe zisuka emgodini.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-shannon kearney (@shannonstudio_)
IPollardstown Fen, eduze kwaseNewbridge kunendawo ene-alkaline peatland emi ngaphezu kwamahektha angama-220 futhi ethola izakhamzimba zayo emanzini achumile e-calcium. Kakhulukazi ngaphansi kobunikazi bombuso, ubaluleke kakhulu emazweni omhlaba futhi uqukethe izinhlobo ezimbalwa zezimila ezingavamile, kanye nerekhodi lempova elingaphazanyiswa lezinguquko ekwakhekeni kwazo kwezimila ezibuyela emuva eminyakeni yokugcina yeqhwa.
ImindeniAbathandi BangaphandleIzinto Ozozenza